जब यु’द्धकालका घ”टनाहरू सम्झन्छन् अनि हुन्छ यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > जब यु’द्धकालका घ”टनाहरू सम्झन्छन् अनि हुन्छ यस्तो!
जब यु’द्धकालका घ”टनाहरू सम्झन्छन् अनि हुन्छ यस्तो!
काठमाडौं । बिगतमा मुलुक यस्तो द्व”न्दमा फस्यो कि नेपाली जनताहरूलाइ निकै सास्ती भयो । तर मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र यु’द्धको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिए । यु’द्धलाई शान्तिमा परिणत गर्दै शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादी खुला राजनीतिमा आयो । नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट खुला राजनीतिमा आएसँगै प्रचण्डले एकीकृत माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेकपाको नेतृत्व लिइरहेका छन् ।
तर, माओवादी यु’द्धकालको घट’नालाई सम्झिएर आफ्नै कार्यकर्ताले प्रचण्डमाथि हा’त उठा’उन थालेका छन् । यु’द्धमा देखाइएको सपना पूरा नभएपछि आफ्नै कार्यकर्ताबाट प्रचण्ड जोगिएर हिँड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको स्वयम् कार्यकर्ताहरु बताउने गर्छन् । आइतबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित पूर्वमन्त्री तथा नेकपा नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी स्मृतिसभामा प्रचण्डमाथि आफ्नै कार्यकर्ताले जु’त्ता प्र’हार गरेका छन् ।
सभालाई सम्बोधन गरेर फर्कने क्रममा जुम्लाका रतन तिरुवाले प्रचण्डलाई लक्षित गरेर जु’त्ता प्र’हार गरेका हुन् । तर, दर्शकदीर्घाबाट उनले प्रहार गरेको जुत्ता मञ्चमा पुगेन । उनी हाल प्रहरी निय’न्त्रणमा छन् । के कति कारणले उनले प्रचण्डमाथि जु’त्ता प्र’हार गरेको हो खुलेको छैन । तर, उनका बुवा माओवादी यु’द्धकालमा राज्य पक्षबाट मा’रिएको खुलेको छ ।
प्रचण्डमाथि आ’क्र’मण भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि २०६९ सालमा भृकुटीमण्डपमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डमाथि पदम कुँवर नाम गरेका युवकले गा’लामा थ’प्प’ड हा’नेका थिए । तत्कालीन एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा रहेको २२ दलीय मोर्चाले दसैं, तिहार र छठ लगायतका पर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रममा कुँवरले प्रचण्डको गालामा थ’प्प’ड हानेका थिए ।
चियापानमा सर्वसाधारणको लाइनमा उभिएर प्रचण्डसँग मञ्चमा हात मिलाउन पुगेका बेला कुँवरले प्रचण्डको गालामा झा’पड हा’ने । प्रचण्डलाई थप्प’ड हानेपछि कार्यकर्ताको कु’टा’इबाट घाइते भएका कुँवर पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता थिए । माओवादी आन्दोलनका नाममा यु’द्धभर ब’न्दुक बोकाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भ्रष्टाचारको थुप्रोमाथि प्रचण्ड उभिएको भन्दै आफूले थ’प्पड हा’नेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
केही दिन प्रहरीको हि’रा’स’तमा रहेका कुँवर प्रचण्डले माफी दिएपछि मुक्त भएका थिए । उनीपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा काठमाडौं १० मा प्रचण्डसँगै सभासद पदको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बने । उनले सो चुनावमा ३८ मत पाएका थिए ।